Sky Windows na Ọnụ Doozọ
Real Estate Listings: » Business Directory » Home Improvement Contractors » US » New York » Brooklyn » Sky Windows na Ọnụ Doozọ1
1 - 1 nke 12
Koodu nzipu ozi: 11223
Anyị bụ ndị gị Premiya na-eweta nke ụkpụrụ ụlọ iko nrụnye na New York mepere obodo. Na Sky Windows na Doozọ ,zọ, anyị raara onwe anyị nye inye ezigbo ọrụ na ngwaahịa ndị gụnyere; echekwa ihu, itinye windo, windo ndochi, ụzọ eji asa ahụ, windo vinyl, windo aluminom, ibo ụzọ, ntinye enyo, mgbidi mkpuchi na mkpuchi canopies. Anyị na-enye ọrụ nrụnye na ngwaahịa dị mma, NYC, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island na New Jersey. Sky Windows & Aluminium maara nke ọma na mpaghara mpaghara atọ maka ụdị ọrụ nrụnye dị mma nke gụnyere: Railings, Storefronts, Wall Curtain, windo, ibo ụzọ, mgbidi mgbochi na kanopi iko. Na mgbakwunye na ọtụtụ ụdị nrụnye a, a makwaara anyị ama ma ọ bụrụ na ọnụ ụzọ ịsa ahụ omenala, Storefront, Nkebi Glass Glass, Wall Curtain, Glass Partition & Dividers, Windows, Glass Shower Doo, Doors, Glass, Cable and Metal Railings There Bụ onyinye ego! Kpọtụrụ Sky Windows na ọnụ ụzọ site na nọmba (718) 517-9178 mentkwụ ụgwọ: ego, ego, kaadị akwụmụgwọ. Oge ọrụ: Mọnde-Fraịdee: 8 nke ụtụtụ ruo elekere isii nke mgbede Satọde-Sọnde: Emechiri Kpọtụrụ US Sky Windows na Ọnụ ụzọ 2545 Stillwell Ave Brooklyn, NY 11223 (718) 517-9178 (888) 759-5963 https://www.skywindowsnj.com Keywords : Onye ọrụ nkwekọrịta, ụlọ ahịa, windo windo, windo dochie, windo windo, windo vinyl, windo aluminom, ọnụ ụzọ, ntinye enyo, mgbidi ákwà mgbochi, mkpuchi iko, iko iko nyc, iko kandụl brooklyn, windo ntinye nyc, windo windo nyc, ụlọ nchekwa nyc, iko windo nyc, windo paneji okpukpu atọ, ọnụ ụzọ ụlọ ahịa, windo ụlọ ahịa, windo na-agbanwe agbanwe, windo iko, iko ụlọ ahịa, mgbidi nkebi iko, ndị na-ekewa ọfịs ụlọ ọrụ, mgbidi iko na-atụgharị, ọnụ ụzọ ụlọ ahịa aluminom, ntinye mgbidi mgbochi, ọnụ ụzọ ụlọ ahịa, mgbidi ihu iko. , windo storefront, windo idozi nyc, aluminom iko ụzọ, windo ụlọ ahịa, windo azụmahịa aluminom, ụlọ ndị dị na Florida, akụkụ mgbidi iko, ogige mkpuchi iko, iko ndị na-eke iko, iko ụzọ ihu ụzọ, vi nyl ákwà mgbochi mgbidi, iko patio na-ekpuchi, oghere ndị a gwara mmanụ, n'ime ime iko iko, windo ụlọ ahịa, mkpuchi ihu ihu, mgbidi iko na-enweghị windo, sistemụ mkpuchi iko ime ime, ndị na-eke iko ọfịs, windo windo na ọnụ ụzọ ụzọ, atụmatụ ụlọ ahịa, mgbidi mgbidi nke iko, brooklyn windo, windo nyc, windo aluminom obibi, windo pane atọ, windo ngbanwe nyc, mgbidi nkebi na-akwụghị ọtọ, ụlọ ahịa iko ihu, ntinye mgbidi iko, echiche ụlọ ahịa n'ihu, ihu ụlọ iko, mgbidi nkesa iko, iko windo windo nj, ụzọ mbata, windo brooklyn, ụlọ mgbochi ákwà obibi, windo mgbidi na iko, windo mkpuchi windo, mgbidi mgbochi ime, mgbidi ụlọ ọrụ, iko iko na-enweghị okirikiri, mgbidi na-ekewa nyc, windo mgbidi windo
Aha ya 8. Oct 2020
Aha ya October 8, 2020
Brooklyn () bụ ógbè New York City, nke dị na Kings County, nke dị na steeti US nke New York, mpaghara kachasị na steeti ahụ, yana mpaghara nke abụọ mmadụ kacha buru ibu na United States. Ọ bụ obodo kachasị ọhụrụ na New York City, nwere ihe dị ka puku mmadụ abụọ na puku ise, narị ise na iri ise na asatọ (54,5,903) na 2019. Akpọrọ ya mgbe obodo Dutch nke Breukelen, o nwere oke ala na mpaghara Queens na nsọtụ ọdịda anyanwụ Long Island. Brooklyn nwere ọtụtụ nnabata mmiri na ọwara mmiri na mpaghara Manhattan n'ofe Osimiri East, Verrazzano-Narrows Bridge na-ejikọ ya na Staten Island. Ebe ala nke 70.82 square kilomita (183.4 km2) na mpaghara mmiri nke 26 square kilomita (67 km2), Kings County bụ obodo New York steeti nke anọ kachasị ntakịrị site na mpaghara ala na nke atọ kachasị na mpaghara site na mkpokọta, n'agbanyeghị na ọ bụ nke abụọ. kachasi n'etiti obodo ise. Ọ bụrụ na ahọpụtara mpaghara ọ bụla dịka obodo, Brooklyn ga-abụ ọkwa nke atọ kachasị na US, na-esote Los Angeles na Chicago. Brooklyn bụ obodo enwere nọọrọ onwe ya (na mbụ obodo na ikike na ikike dị na usoro nke New York State Constitution) rue na Jenụwarị 1, 1898, mgbe, mgbe ogologo ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọgụ metụtara mmekọrịta ọha na eze na 1890s, dị ka ime obodo ọhụrụ. Charter nke "Greater New York", Brooklyn bụ obodo ndị ọzọ, nwegasịrị, na ógbè ndị ọzọ ka jikọtara ọnụ ka ha wee bụrụ Obodo New York nke oge a, gburugburu Oke New York Bay nwere ngalaba mpaghara ise. Ogbe a na-aga n’ihu, n’agbanyeghi, ime ka odi iche. Ọtụtụ ógbè dị na Brooklyn bụ akara agbụrụ. Ebumnuche gọọmentị nke Brooklyn, nke gosipụtara na akara na ọkọlọtọ Borough, bụ Eendraght Maeckt Maght, nke sụgharịrị site na mbido Dutch ọhụụ dị ka "Unitydị n'otu na-eme ike". N’ime iri afọ mbụ nke narị afọ nke 21, Brooklyn enwetala mmetụ dị ka ebe njedebe dị mma maka ndị hipster, na -eme ka ndị mmadụ mara mma, ọnụahịa ụlọ na-abawanye uru na mbelata nke enweghị ike ụlọ. Kemgbe afọ 2010, Brooklyn abụrụla ebe a na-eto eto nke iteghete, ụlọ ọrụ dị elu na teknụzụ dị elu, nka na nka.